Jasiiradaha ugu wanaagsan Giriigga Jasiiradaha ugu wanaagsan Greek | Wararka Safarka
Jasiiradaha ugu wanaagsan Griiga
Mariela Carril | 12/07/2021 10:00 | Talooyin, safarka
Mid ka mid ah meelaha xagaaga ugu fiican adduunka oo dhan waa jasiiradaha Giriigga. Waa maxay meel loo socdo! Ma jiro meel qurxoon oo qurxiya badda Mediterranean-ka. Waxaa hubaal ah inay jiraan qurux kale, laakiin kala duwanaanta muuqaalka iyo xiisaha aan ku noolaan karno jasiiradaha Giriigga ugu fiican wax siman ma leh.
Sidoo kale, waxaa jira jasiirado Giriig ah oo ku habboon inaad u safarto sidii lamaane, jasiirado kale inaad reer ahaan u tagto iyo kuwa kale oo kaligood socdaalo dadkana la kulmo. Waa kuwee koox safar ah oo aad ku jirtid?
1 Jasiiradaha ugu wanaagsan Griiga ee u socdaalaya sidii lamaane
2 Jasiiradaha ugu wanaagsan Griiga ee lala raaco qoyska
3 Jasiiradaha ugu wanaagsan Giriigga ee safarka kali ah
Jasiiradaha ugu wanaagsan Griiga ee u socdaalaya sidii lamaane
Jasiiradaha Giriiggu waxay yaqaanaan sida laysku daro xeebaha quruxda badan iyo gastronomy-ka macaan, sidaa darteed iyagu waa qorshaha ugu fiican ee lamaanayaasha, ha ku safraan bisha Malabka ama si fudud fasax. Maqaalka maanta oo dhan waxaan ku arki doonnaa inay jiraan jasiirado u roonaan kara lammaanaha laakiin sidoo kale qoysaska ama keli socotada, iyo, waxaan u maleynayaa, inay tahay waxa ugu fiican safarkan socdaalkiisa. Midnimadeeda iyo hodantinimadeeda.
La jasiiradda corfu, oo leh saameyn wanaagsan oo Venetian ah, waa mid jaceyl badan. Lamaanayaashu waxay kireysan karaan mootada oo ay tamashlayn u aadi karaan, iyagoo dalxiis wada leh, indhaha ku haya badda markay dabayshu garaacayso wejiyadooda. Magaalada Corfu waxaa ka buuxa hoteelo yaryar iyo hudheelo noocyo kala duwan leh. Laakiin marka lagu daro, Corfu wuxuu leeyahay xeebo qurux badan, oo hodan ku ah taariikhda iyo dabeecadda. Gaar ahaan Xeebta D'Amour.
Jasiiradda Santorini waa nooc, kaarka boostada ee jasiiradaha Giriigga oo dhan. Waa meesha ugu fiican ee griigga loogu talagalay bisha malab maxaa yeelay waxaa jira kaniisado badan oo qurux badan oo qorax dhaca ugufiican laga fikirayo. Sidoo kale, waa kuwan qaar ka mid ah hudheelada ugu wanaagsan dalka, sida Hotel Katikies, ee Oia. Aragtiyada kale ee adduunka ee qorraxda dhacaya waxaa jira Astra Suites sidoo kale.
Mykonos Waa qaddarka Lamaanaha isqaba heer sare waana sababta oo ah jasiiradda taariikh dheer ayey u leedahay kooxdan. Waad tagi kartaa sidii lamaane ama kaligaa ... oo waxaad ku noqon kartaa lammaane ahaan. Yaa og? Waxaa jira makhaayado badan oo wanaagsan iyo hudheelo, baarar iyo baararro meelwalba leh iyo xaflado badan. Ku habeen mykonos waa wax caadi ah.
Zakynthos Waa meel kale oo weyn oo loo safro sidii lamaane. Biyihiisu waa cad yihiin, xeebahoodu waxay leeyihiin ciid oo ma aha quruurux, tuulooyinkeedu waa qurux badan yihiin waxaana jira dhalinyaro badan. Dabcan, kuwa caanka ah xeebta markab Waa booqashadii ugu fiicnayd dhammaan.
Jasiirad kale oo lammaane ah ayaa ah Paros, inta udhaxeysa Santorini iyo Mykonos. Way ka weyntahay deriskeeda laakiin way dagan tahaya marka la eego martida. Kadib, waa ka raqiisan tahay. Waxaa jira dad badan oo u taga inay ku tababbaraan dabaysha iyo dabaysha, laakiin asal ahaan waxay ku saabsan tahay ogaanshaha xeebaheeda, matxafkeeda qadiimiga ah, kaniisadaha. Naxos Waa meel kale oo qurux badan, jasiiradda ugu weyn ee kooxda 'Cyclades'.
Naxos badanaa waa la barbar dhigaa Paros, laakiin kan dambe ayaa bixiya xulashooyin fiican oo lagu wareego markaa badanaa waa la doortaa. Ie Naxos waxay leedahay isku xirnaan bas iyo doon iyo nolol habeennimo, laakiin waa ka aamusan tahay. Dhaqdhaqaaqyo badan iyo nolosha magaalada waxaa ku yaal jasiiradda Rhodes, oo ah jasiirad taariikh badan leh oo dalxiis badan.
Ugu dambeyntii, Crete waa inuu ku jiraa liistadaan maxaa yeelay waa meel ka raqiisan kuwa kale, labadaba gastronomy iyo hoy. Waa jasiirad ballaaran sidaa darteed waxaa jira xulashooyin badan oo hudheel ah, ka qaalisan ama ka jaban, waxaa jira xeebo badan iyo a nidaamka gaadiidka wanaagsan.
Jasiiradaha ugu wanaagsan Griiga ee lala raaco qoyska
Giriiggu wuxuu leeyahay jasiirado aan la tirin karin, 227. Marka way adag tahay in la doorto. Cyclades-ka, Dodecanese, Ioniyanka ...? Markii aad la safreyso carruurta, had iyo jeer waa lagugula talinayaa inaad qorsheysato, sidaa darteed waxaan rajeyneynaa inaan ku siino liis wanaagsan oo jasiiradaha Griiga ah oo aad caruurta la raacdo.
Corfu weli waa ikhtiyaar. Waa jasiirad aad u cagaaran, oo leh buuro qurxoon iyo tuulooyin yaryar oo xeebo ku wareegsan. Dhinaca woqooyi waxay bixisaa biyo deggan si maalinta loo qaato. Xarunta taariikhiga ah ee Corfu, Dhaxalka aduunka, waa wax fiican in la socdo oo la jeclaado qaab dhismeedkeeda Venetian, caruurtu ha dhadhamiyaan qaar ka mid ah cuntooyinka maxalliga ah ...
Iyo haa, waxaa jira waqti la seexdo maxaa yeelay halkan, sida inta badan jasiiradaha Giriigga, inta u dhexeysa 3 iyo 5 galabtii waqtiga ayaa istaaga. Waxaad ku dari kartaa a dameer fuushan, oo dalxiis u ah burburka Macbudkii Artemis, doon raacid leh hoosta hufan, ah Beerta Hydropolis ee Acharavi ...
Crete sidoo kale qoys ahaan waa loo booqan karaa. Burburka, godadka badda, xeebaha qoraxdu, waa khiyaali ku jirta indhaha carruurta. Tani Knossos, waa meel aad u wanaagsan oo carruurta lagu geeyo safar dib ugu soo noqday, iyo sidoo kale magaalada Heraklion waxaa jira matxafyo badan oo loogu talagalay in lala booqdo carruurta. Tusaale ahaan Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah iyo CretAquarium. Waxa kale oo jira Xadiiqadda Dinosauria.
Intaas waxaa sii dheer, carruurta Crete way awoodaan ku raaxayso hareeraha Elafonisi kuna ciyaar barkadaha dhagaxa weyn ee Kato Gouves, Kalluumeysiga, kalluumeysiga, sahaminta Godka Dikteon ama ku dhex lugeynta weyn Kanaarada Samaariya, waa kan ugu weyn Yurub oo dhan.
RoodesIyada oo ay qalcaddii dhexe, waa weyn sidoo kale. Waxaa jira xeebo badan oo qoys, sida Xeebta Faliraki, oo leh baarkinka biyaha. Laakiin asal ahaan waxa ugu fiican ee ay bixiso waa halkan xagaaga oo aad uga sii dheer kan jasiiradaha kale, sidaa darteed xitaa waad ka bixi kartaa meel ka baxsan xilliga sare. Waxaa jira quraaradda aad u fiican, kan Marline Aquarium, dekedda, si aad u ogaato ugana yaabiso nolosha biyaha hoostooda, waxaa jira Dooxada Balanbaalis iyo haddii kale had iyo jeer waxaa jira buuro iyo keymo lagu socdo.
Santorini waxay soo bandhigtaa foolkaanadii tagtay iyo mid hada jirta. Cunug kasta wuu awoodaa rog iyada oo fikradda ah inaad ku dhex marto foolkaanada ... laakiin intaas ka sokow waxaa jira tuulooyin qurux badan iyo xeebo riyadeed. Jawi aad loo yaqaan ayaa laga dareemayaa Kamari ama Perissa. Haddayna carruurtaadu jeclaadaan taariikhda waxaa jira burburka dejinta Akrotiri.
Fasax aamusnaan ah, oo nabdoon oo qurux badan waxaa jira meelo kale oo lagula taliyo sida Milos, oo leh godadkeeda qarsoon iyo qaab dhismeedka dhagaxyada quruxda badan. Lefkada, Paros, Kos ama Burburka Markab ee Zaknthos sidoo kale wuxuu ku jiri karaa liiskan.
Jasiiradaha ugu wanaagsan Giriigga ee safarka kali ah
Jasiirad kasta waa meel wanaagsan oo loogu talagalay safarka kelida ah, laakiin waa inaad u baahatid tixgeli hoy raqiis ah, qolalka jiifka ama hoteelada, duulimaadyada fudud, isku xirnaanta doonta, baararka saaxiibtinimada leh, cawayska, gaadiidka dadweynaha oo wanaagsan ...
Marka, tixgelinta liiskan waxaan dhihi lahaa jasiiradaha ugufiican ee kalidaa la safri karaa waa Crete, Ios, Mykonos, Santorini, Naxos, Rhodes ... Kereeti Waa jasiiradda ugu weyn Giriigga waxayna leedahay wax badan oo loogu talagalay safarrada keli ah. Waxaa loo qeybiyaa afar gobol mid walbana wuxuu leeyahay magaaladiisa, hoteellada uu degan yahay iyo cawayska xiisaha badan ee habeennimo. Magaalada Rethymno waxaa ku yaalo hoyga dhalinyarada, Heraklion Intra Muros iyo Chania magaalada Cocoon, weyn hoy si aad ula kulanto dadka.
Ios waa jasiirad kale oo ku habboon dhalinyarada safarka ah, backpackers. Waa goob caan ku ah Australiyaanka iyo Waqooyiga Ameerika ee ku safraya Yurub. Way ka jaban tahay deriskeeda, Mykonos. Xiga liiska Santorini, jasiiradaha Ioniyaanka. Aad u wanaagsan hoyyo jaban, sida hudheelka Caveland, ama Villa Kasteli ama hoyga dhallinyarada ee Anna, ee ku yaal Perisssa. Sidoo kale, waa jasiirad bas fudud lagu dhex maro.
Sida iska cad ma ilaabi karno Mykonos, waa jasiiradda ugu soo jiidashada badan dhammaan. Xisbiyada, dadka nooc kasta iyo midabbo kala duwan, xeebo sharaf leh ... Naxos waa jasiirad kale oo wanaagsan oo keligaa la safro, wax badan ka dabacsan, oo leh khamri, waabab iyo boorsooyin. Qolalka ugu jaban ayaa ka baxsan magaalada hore, tusaale ahaan Agios Georgios. Jasiiradda Aad ayuu isuguxiran yahay waxaadna ku safri kartaa doonta meel kasta.
Rhodes iyo dhaxalkiisii ​​Saliibiyadda waa wax aan la dafiri karin oo soo jiidasho leh. Tani agagaarka xeebta turkiga markaa waad u gudbi kartaa berriga haddii ay tahay dhammaadka safarkaaga. Dabcan, waan sii wadi karnaa ku darista jasiiradaha ama ku celcelinta qaar ka mid ah kuwa ka muuqda qeybihii hore. Waana inaad safarka samayso. Dhamaan jasiiradaha Griiggu waa qurux badan yihiin. Way badan yihiin, taasi waa dhibaatada, markaa talo-bixintu waxay tahay inaad diirada saarto oo aad uga fikirto nooca fasaxa aad rabto.
Xeeb, cunno iyo nasasho? Dalxiisyada, xiisaha, la socodka carruurta? Taariikhda, Ciyaaraha, Matxafyada? Habeen, xaflad, jacayl, jinsi? Ha welwelin, waxaa jira jasiirad, ama dhowr ah, adiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Jasiiradaha ugu wanaagsan Griiga
Dharka dhaqameed ee Jabbaan